North Italy si Skyrocketing Irrigation Akwụ ụgwọ N'ihi Unwu - Potatoes News
“Anyị na-agbapu mmiri n'ubi ndi nduku ruo ọtụtụ izu ugbu a, na-enwewanye mgbanwe na-agbanwe. A manyere anyị ime ya, n’ihi na mmiri anaghị ezo. Massimo Cristiani, onye isi oche nke Selenella kọwara na nke a na-abawanye na mmefu ego ma e jiri ya tụnyere ọkọlọtọ, mana ọ siri ike ikwu maka etu esi arụ ọrụ ugbo ugbu a. Horticultural osisi na-emetụta karịsịa ụkọ mmiri ozuzo ugbu a. Mmiri ezobeghị kemgbe ọtụtụ ọnwa na mgbago ugwu Italytali, belụsọ maka oke ifufe na ebutegharị emeela ka mmiri pụọ, n’enyeghị osisi ohere iji ya mee ihe kachasị mma.
Gba ala mmiri dị oke mkpa, mana ọ naghị arụ ọrụ dị ka mmiri ozuzo oge niile, n’otu aka n’ihi na ihu igwe dị ugbu a na-egosi oke abalị oge oyi, nke anaghị ekwe ka osisi rụọ ọrụ nke ọma. “Ihe ọkụkụ na-enwe nrụgide; enwere ike ịdapụta na mkpụrụ, ma anyị ga-ahụ n'oge owuwe ihe ubi.
Ihe ubi Emilia-Romagna niile na-ata ahụhụ site na mgbanwe mberede site na mmiri oyi na-acha ọkụ. "Tomato na-emepụta ihe, poteto, akwụkwọ nri, osisi vaịn na osisi mkpụrụ osisi chọrọ mmiri mmiri mgbe niile n'ihi oke okpomọkụ ma n'ehihie ma ọkachasị n'abalị, na-esokarị ifufe na-ekpo ọkụ," Marcello Bonvicini, onye isi ala nke Confagricoltura Emilia Romagna kwuru.
“Rigmị mkpụrụ mmiri dị mkpa na usoro mkpụrụ osisi, yana yana mkpụrụ mkpụrụ mkpụrụ. Nke a na-egosi mmụba nke ụgwọ maka nkesa nke mmiri mmiri maka ebumnuche ogbugba mmiri na maka njikwa na ndozi nke usoro. Nke a bụ mmụba na mmefu maka onye ọrụ ugbo n'ihi mmetụta nke mgbanwe ihu igwe. Ọzọkwa, ọ dị mkpa iji mezuo mmiri adịghị oke, iji zere ihe ize ndụ nke mgbasa nke ọrịa fungal nke oke iru mmiri na nkwụsị mmiri na-ebute ".
Mberede mmiri emetụtakwala ndị na-akụ mkpụrụ osisi nke ntu oyi Eprel gburu. N'agbanyeghị obere ma ọ bụ na enweghị mkpụrụ, ha ga-aga n'ihu na-agba mmiri osisi ha ka ha wee ghara imebi mkpụrụ osisi niile.
“Ijide n'aka na enwere mmiri, ọkachasị na mpaghara ndị Apennine na-asọpụta nke Osimiri Po, dị ezigbo mkpa. Mgbanwe ihu igwe na-agwa anyị ka anyị mee ngwa ngwa wee guzobe usoro ịgba ala mmiri maka ala ubi, gụnyere ubi vaịn na ubi oliv, ”ka onye isi mpaghara mpaghara Confagricoltura kwubiri.
Rogba mmiri mmiri nke mmiri na-efu n'ihi ụkọ mmiri ozuzo
Tags: oké ọkọchịogbugba mmiri n'ubiusoro ogbugba mmiri n'ubiItalyakukuakuku nduku
Ijikwa nduku zaa - ogbugba mmiri n'ubi ugbu a iji
Rabobank: 'Idebe mmiri na isi azụmaahịa'
"Ekwe kwa hectare afọ a bụrụkwa maka nduku mmepụta"
Iraq - ụlọ ọrụ mmepụta ihe ọhụrụ
Tinye slurry nke ọma na mkpụrụ nduku
SNACK Manufacturers IBERSNACKS NA-AKWSKWỌ AKW WEKWỌ AKW WEKWỌ AKW WEKWỌ AKW WEKWỌ